Aperçu du fichier dany .30 par Administrateur - Page 5/21 - Fichier PDF
ranomasina. 2672. Lazain’ireo mpitaridalana fa misy ny olona izay saika mandraiki-marary mihίtsy ka
tsy tia vilona ny hiverina intsony ao anaty tîneļā ao.
2673. Satria moa, hono, manampy amin’ny fitsaboana ny aretina samy hafa ny fifaneraserana
amin’ny biby, dia maro ireo sembana isan-karazany no entin’ny olona tomponandraikitra amin’ny
toerana tahaka izany. 2674. Nanaitra ahy, tamin’izany andro izany, ny fahitana tanora sembana maro
tokoa izay notarihin’ny tomponandraikitra tany an-toerana. 2675. Teo anelanelan’ny 15 ka
hatramin’ny 25 taona, raha araka ny filazan’ny olona nitarika azy iréo tamiko, ny taonan’izy iréo.
2676. Ny nanintona ny saiko, dia ny tsy mba nahitako afa-tsy fotsy hoditra fotsiny ihany,
tamin’iréo sembana iréo. 2677. Tsy mba manam-bola handefasana ny azy iréo ho notsaboina ve ny
hafa volon-koditra ? 2678. Notazoniko ho ahy iréry monja fotsiny madina ihany ny fanontaniana.
2679. Nahatratra dimy amby roapolo ny isan’iréo sembana no hitako iréo.
2680. Misy, hono, olona izay milaza ary mino fa mba hialana amin’ny fahatetehan’ny isan’ny
zaza izay mety ho teraka sembana, dia aleo mivady samy hafa volon-koditra; roa no isan’ny zaza
tian’ny vehivavy Fįraşay hateraka ao anatin’ny fiainany ;
- dimy ka hatramin’ny roa ambinin’ny folo kosa no isan’ny zaza ateraky ny vehivavy fįraşay
2681. Fitadiavana ny marina daholo no anton’izany. 2682. Raha mandalo any Marineland
(Mariŋalady) any io anao io, dia ho lasamborona noho ny fahitana iréo bibin-dranomasina goavambe
ka mety hahatratra any amin’ny folo taonina any ho any ny lanjan’ny anakiray, kanefa dia fatrapanaiky iréto olombelona izay zara raha mahatratra fitopolo kilogįraɱā fotsiny fa mpikarakara
(soigneur et non dresseur) an’izy iréo. 2583. Fanimbana an’iréo biby iréo ve ny fitazonana azy iréo
tahaka izay natrehana tao Marineland é? 2584. Azo heverina ho famonjena an’izy iréo ve ny
fahatongavan’izy iréo tao Marineland é?
2585. Manintona ny olombelona tsy ankanavaka ny fahitana ny zavatra izay ataon’izy iréo.
2686. Mbola fitadiavana ny marina ve izany rehétra izany?
2687. Ivarainako kely mba ho fintinin’ny tany aloha tany, ny amin’ity fahamarinana iray loha
ity. 2688. Ny Baiboly Masina Teşįtameta Taloha dia milaza fa ny Masoandro no mihodina manodidina
ny Tany. 2689. Tonga i Mopera Pôlôné Nicolas Copernic. 2690. Nambarany fa ny Tany no mihodina
manodidina ny Masoandro. 2691. Nohelohin’ny Egilίjy Katôlίka Rômaŋā ho dorana velona izay olona
nanaiky izany fanambarana izany.
2692. Niaina indray koa i Mopera Italiaŋā Giaordano de Nola. 2693. Nanaraka ny filazan’i
Nicolas Copernic izy. 2694. Nitariny anefa ilay fanambarana. 2695. Tsy io Tontolon’ny Masoandro io
ihany, hoy izy, no misy fa tontolo izay miίsa tsy hita isa tahaka an’io; ary misy zava-miaiña koa añy
amin’ny toerana ivlañin’ny Tany añy.
2696. Teo amin’ny lafiny zotrahendry moa, dia nafatony tamin’ny raikipohy izay manao
manao hoe ny heviny : « voafetra ny olombelona amin’ny mahairéry azy » fa « tsy voafetra ny
olombelona amin’ny mahaolombelona azy » (ou l’homme est fini en tant qu’individu mais infini en
tant qu’homme). 2697. Nasaina nitsipaka ny heviny i Mopera Giordano de Nola, satrίa dia
nohizingizinina taminy fa mitsipaka ny Baiboly Masina Teşįtameta Taloha ny fahamarinana izay
tazoniny. 2698. Tsy nanaiky izy. 2699. Nasain’ny fitsaran’ny fikambanamben’ny Karįdinaļā
Katôlika Rômaŋā ho dorana velona izy tamin’ny 17 fevįrié 1600.
2700. Efa voalazantsίka tany aloha tany izany rehétra izany. 2701. Ny antony amerainako azy
eto, dia noho izao antony manaraka izao. 2702. Nahavίta ny Masolavitra voalohany tao anatin’ny
tantaran’ny olombelona ny manampahaizana italiaŋā izay antsoina hoe : Galilée. 2703. Tamin’ny
taona 1609, dia natodiny tany amin’ny lanitra ny masolaviny. 2704. Dia nihiaka hafaliana izy ary dia
nitatatatata nanambara fa marina tanteraka araka ny fahamarinana şiatifίka ny voalazan’i Nicolas
Copernic ; efa nañambára hatramin’izáy ihány koa anéfa ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fa tsy maintsy
mitandrina tsara tokóa ny amin’izáy hevitra teraka avy amin’ny famakiana ny Baibóly Masina kanéfa
mitsipaka sy manohitra ny fivoasan’ny Egįlίjy Kaatôlίka, ny olombelona izáy misého azy iréo ho
2705. Nentina notsarain’ny Fikambanamben’ny Karįdinaļā Katôlika Rômaŋā izy. 2706.
Nasaina nitsipaka ny fahamarinana şiatifίka izay manohitra ny fahamarinan’ny Baiboly Masina
Teşįtameta Taloha izy. 2707. Tsy mbola no te-ho faty izy ka dia sahy nitsipaka ny fahamarinana tsy no
azo lavin’ny şiaşy izay noporofoin’ny masolaviny. 2708. Nefa, hoy izy, hino foana aho fa ny Tany
no mihodina manodidina ny Masoandro.
2709. Rehefa notohizin’ny Manampahaizana amin’izao fotoana iainantsίka izao ny
fahamarinana şiatifίka izay nambaran’i Nicolas Copernic ary nohatsarain’i Giordano de Nola ka
noporofoin’i Galilée, dia niafara any amin’ny Big Bang ny vokany. 2710. Mino ny olombelona rehétra
amin’ny alalan’ny manampahaizany fa mitotaly eo amin’ny zato lavitrisa (100 000 000 000) eo ho eo
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00289404.